Jimicsi iyo jimicsi wadada: jimicsiga wadada | Ragga Stylish
Jimicsiga waddada, ku tababar meel kasta
Tababbarka waddada ama jimicsiga waddadu waa dhacdo cusub oo dhaqan-bulsheed, laakiin hadda aad u baahsan. Waxay ka kooban tahay jimicsiga banaanka, guud ahaan wadada, jardiinooyinka ama meelaha caamka ah.
Si kastaba ha noqotee, anshax-marintaan ayaa aad uga badan kaliya tababarka jirka; waxay ka kooban tahay qaab nololeed dhan waxayna leedahay dhaqan iyo bulsheed.
1 Waa maxay tababarka Jidku?
3 Asalka jimicsiga wadada
4 Meesha ugu fiican ee lagu tartamo
5 Hindisaha Bulshada
6 Jimicsiga waddada iyo calisthenics
Waa maxay tababarka Jidku?
Jimicsiga waddadu wuxuu ka kooban yahay jimicsiyo taxane ah oo loo sameeyo si loo qaabeeyo jirka loona helo iska caabin weyn iyo kacdoon. Waxay u baahan tahay xirfad, dheelitirnaan iyo wixii ka sarreeya xoog oo dhan; ah Qalabka ugu muhiimsan waa jirka laftiisa, kaas oo miisaankiisa diidaya dhaqdhaqaaqa.
Kaabayaal ahaan cayaarahaan, dhammaan noocyada biraha birta ee laga helo jardiinooyinka sidoo kale waa la isticmaalaa. Waa bedel bilaash ah oo aan u baahnayn miisaanka ama aado jimicsiga.
Jimicsiyada ayaa ugu horreyn ah soo jiidasho, riixitaanno, iyo fadhiisino. Dedaalka iyo iska caabbintu wey sii kordhaan kolba haddii ay leyliska sii adkaanayaan. Xaaladaha qaarkood, tababbarku badanaa wuxuu isu beddelaa show dhab ah oo xoog iyo bandhig isboorti. Xilliga firaaqada, xitaa jaranjarooyinka aadka u daran ayaa la sameeyaa
Anshaxa dariiqani wuxuu qayb ka yahay a fikradda cusub ee nolosha caafimaadka leh iyo fayoobaanta, taas oo doonaysa inay joojiso qaab-nololeedka deggan ee nolosha hadda jirta. Fikradda ayaa ah inaadan u baahnayn wax walboo aad ku sameyso isboorti; wadada waxay noqon doontaa marxalad ku filan.
Hadafku maahan kaliya muuqaalka jirka, laakiin inaad yeelato firfircoonaan badan, firfircoon oo firfircoon oo aad kantaroolo badan ka hesho. Ku dhaqanka hawshani waxay sidoo kale saamayn toos ah oo togan ku leedahay wadnaha iyo xididdada dhiigga.
Waxay sidoo kale ku saabsan tahay sidii loo gaari lahaa isku dheelitirnaan maskaxeed iyo mid shucuureed. Waqtigan xaadirka ah tababarka jimicsiga ayaa ka duwan dhismaha jirka ama jimicsiga; looma baahna oo keliya in lagu qanco isku-kalsoonaanta qofka. Sidoo kale waa waxqabad dabiici ah oo marin u ah qof walba.
Dhacdadani waxay leedahay qiime bulsho oo weyn, tan iyo waxay awood u yeelatay inay la xiriirto dhalinyarada ka soo jeeda qaybaha liidashada iyo khilaafaadka oo ay ka dhigaan inay galaan dhaqdhaqaaq caafimaad qaba oo ay ciyaaraan isboorti. Wiilasha tababarta maalin kasta waxay abuuraan xiriiro adag oo midba midka kale ah, taas oo dhiirrigelisa is-dhexgalka iyo wada shaqeynta.
Mid kale oo ka mid ah guulaha hawshani waa taas abuuraan caadooyin masuuliyad iyo edbin ah. Waxay sidoo kale kor u qaadeysaa qiyamka sida midnimada, dulqaadka iyo kalsoonida waxayna sare u qaadaa awooda shaqsiyadeed iyo shaqeed ee xirfadleyda, iyagoo inta badan hagaajiya xaaladahooda nololeed.
Tababbarka waddada ayaa door muhiim ah ka ciyaaray bulshada is dhexgalka dadka laga tirada badan yahay, waxbarid iyo ku-beeris ixtiraam xubnahooda.
Asalka jimicsiga wadada
Dhaqanka isboortigaan wuxuu ku dhashay waddooyinka xaafadaha ugu faqiirsan Ameerika. Waxaa ku dhaqmayay dhalinyaro Afrikaan Mareykan ah jidadka iyo fagaarayaasha, iyagoo u adeegsanaya jawiga magaalooyinka aalad lagu fuliyo layliyada.
Bilowgeedii, jimicsiga waddada ayaa si dhakhso leh u horumaray waxaana hadda sidoo kale looga dhaqmaa magaalooyin badan oo Yurub iyo adduunka ah. Wadooyinku waxay noqdaan jimicsiyo waaweyn oo boos walbana waxaa loo isticmaalaa cayaaraha.
Waqtigan xaadirka ah, shabakad aad u kala duwan ayaa la sameeyay taas oo aysan jirin kaliya dhalinyarada ka soo jeeda jinsiyadaha madow ama xaalad ka reebitaanka bulshada. Dhallinyaradii ka daashay jawiga jirdhiska ayaa iyaguna ku soo biiray, dadka doonaya inay baxaan dhinac u eexdiisa oo uu doonayo inuu naftiisa u huro tababarka waddada.
Kordhinta edbintaan adduunka oo dhan waxaa inta badan u sabab ah shabakadaha bulshada, oo ka dhigay mid muuqda. Fiidiyowyada xirfadleyda ayaa faafay waxayna tixraac u yihiin dhalinyaro badan. Habka ugu weyn ee jimicsiga loo barto waa kanaalka YouTube-ka. Tani waxay ahayd farsamadii loo adeegsaday in lagu faafiyo dhaqdhaqaaqyada isla markaana adduunka loogu muujiyo meelaha aadaabtan lagaga dhaqmo.
Meesha ugu fiican ee lagu tartamo
Bilowgii hawshan waxaa lagu dhaqmi jiray oo keliya waddada, iyadoo la adeegsanayo alaab guri oo lama filaan ah. Laakiin waxyar aayar Meelo badan oo takhasus leh ayaa soo muuqday, oo leh kaabayaal loo abuuray ujeedkan, halkaasoo tartamada qaarkood ay ka dhacaan.
Xilligan waxaa jira tartamo rasmi ah oo fara badan, labadaba Spain iyo caalamkaba. Horyaaladan ayaa si aad iyo aad ah u dhameystiran waxayna martigelinayaan qaybo badan marka loo eego qaababka ragga iyo dumarka. Dhexdooda, habka saxda ah ee jimicsiga loo qiimeeyo, taas oo muujineysa inaad leedahay awood kugu filan oo aad ku xakameyn karto dhaqdhaqaaqa kala duwan.
Tartamada ayaa ka fikiraya qaabab kala duwan. Xorta ama xaraashka, tartamayaashu waxay ku soo bandhigi karaan xirfadahooda waqti xaddidan. Inta lagu jiro qaabka jimicsiga, muusikada iyo jimicsiga waa in la isku daraa si loo muujiyo isku-duwidda, xoogga iyo hal-abuurka.
Habka adkeysiga ayaa ku qasbaya kaqeybgalayaasha inay gaaraan xadka iyagoo u gudbinaya baaritaano jireed oo kala duwan. Qeybta xoogga, ciyaartooydu waxay isku dayaan inay ka adkaadaan iska caabin inta jeer ee suurtogalka ah. Ugu dambeyntiina, qaabka xiisadda, kaqeybgalayaashu waxay sameeyaan jimicsi adag oo adag.
Tartamada rasmiga ah waxaa badanaa la socda dadaallada bulshada, sida cuntada ama wadista dharka, aqoon isweydaarsiyo ama howlo kale oo diiradda lagu saaray mawduuca wadada.
Isbaanishka waxaa ka jira ururo iyo naadiyo badan. Xiriirka Isbaanishka ee Wadooyinka Shaqada iyo Calisthenics ayaa sidoo kale la abuuray (FESWC), oo sharci ahaan ay aqoonsan tahay Dowladdu. Ururkan aan macaash doonka ahayn wuxuu doonayaa inuu sare u qaado heerka ciyaarta ee bulshada jimicsiga waddooyinka iyo xirfadleyda calisthenics.
In kasta oo heerka xirfad-xirfadeedku uu sii kordhayo, waxaa lagama maarmaan ah in la awoodo in la ilaaliyo ruuxa dariiqa ee dhaliyay ifafaalahaan.
Jimicsiga waddada iyo calisthenics
Jimicsiga waddada badanaa wuxuu la xiriiraa calisthenics. In kasta oo aysan si sax ah isku mid ahayn, haddana waxay leeyihiin xiriir aad isugu dhow. Waxaad dhihi kartaa in jimicsiga waddada uu asal ahaan ka soo jeedo calisthenics.
Calisthenics waa hab tababar qadiimi ah oo ku saleysan biomechanics-ka aadanaha. Waxay soo saartaa dhammaan dhaqdhaqaaqyada jirka bini'aadamku awood u leeyahay inuu sameeyo oo wuxuu kordhiyaa xoogga illaa laga gaaro ujeeddo kasta.
Tababbarka noocan ah wuxuu si tartiib tartiib ah u kordhiyaa dhibaatada. Qof kasta oo ku dhaqma wuxuu ku horumaraa heerka culeyskiisa, taasoo ka dhigaysa waxqabad aad u ammaan badan qof walba.
Farqiga ugu weyni waa taas Calisthenics waxay isticmaashaa oo keliya jimicsiyo miisaanka jirka ah, oo lagu samayn karo sagxadda dhulka ama waxyaabaha sida barbaraha sare ama giraanyada. Waa hanaan diiradda saaraya dhaqdhaqaaqa kooxaha muruqyada.
Jimicsiga waddada, dhinaca kale, wuxuu isku daraa dhaqdhaqaaqyo kacsan iyo qarax, iyo xitaa jaranjarooyin xad dhaaf ah. Waa laba nooc oo isku falsafad ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Jimicsiga waddada, ku tababar meel kasta
Dukaamada dharka jaban ee internetka